जजले किन बुझ्न सकेनन विक्की अग्रवालको यो प्रस्तुति ? – Gandaki Chhadke
काठमाण्डौ – कान्तिपुर टेलिभिजनमा हरेक शुक्रवार र शनिवार प्रसारण हुँदै आएको चर्चित रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन–२ मा शनिवार राति भएका दुई वटा प्रस्तुति चर्चामा रहे ।
पहिलो थियो विक्की अग्रवालको प्रस्तुति । अग्रवालको पेन्टाेमाइम (नबाेली अभिनय गर्ने शैली) प्रस्तुतिको प्रशंसा गर्दै जज तथा चलचित्र निर्देशक प्रदीप भट्टराईले भने, ‘यो लेभलमा आएर यो रिस्क लिनु जायज छ ? मैले कति सिनेमाहरू देखेको छु, जो समयभन्दा अघि बन्दा जति पाउनुपर्ने हाे त्यति अडियन्स नपाएको, जति उठाउनुपर्ने पैसा नउठाएको, आर्टलाई माया गरेर बनाएको आर्ट फिल्महरू नचलेको संसारमै उदाहरण छ ।
तपाईँमाथि पनि मलाई त्यस्तै डर छ ।’ त्यस्तै नायिका तथा जज ऋचा शर्माको प्रतिक्रिया थियो, ‘यसकाे रिजल्ट जे पनि हुन सक्छ । तर कमेडी च्याम्पियनका लागि तपाईँ एउटा उदाहरण हो, आउने धेरै–धेरै सिजनका लागि हामीसँग विक्की अग्रवाल भन्ने एक जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, जसले कमेडी च्याम्पियनमा सबै भेराइटी ट्राई गर्नुभयो इन्क्लुडिङ माइन्ड भन्न पाउँछाैँ ।’